Ethiopian Airlines bịanyere aka na nkwekọrịta mmekọrịta $ 500M na Collins Aerospace
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ethiopian Airlines bịanyere aka na nkwekọrịta mmekọrịta $ 500M na Collins Aerospace
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • News • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndi otu ụgbọ elu nke ndi Etiopia abanyela aka na nkwekorita nke ego ha ruru $ 500 na Collins Aerospace, otu n’ime ndi n’enye ahia nke ugbo elu na ihe nchebe nke di na West Palm Beach, Florida.
Nkwekọrịta afọ 25 na-ekpuchi mmezi nke ndị na-agbanwe ọkụ, sistemụ njikwa ikuku na nkeji mmanụ na 60 De Havilland Canada Dash 8-400 turboprops.
Banyere nkwekọrịta ahụ, onye isi otu ndị Etiopia, Mr.Tewolde GebreMariam kwuru, sị, “N'ime usoro ụzọ anyị dị mkpa, Ọhụụ 2025, anyị na-eche ime ka ngalaba MRO anyị bụrụ onye na-eweta ọrụ na Africa na ego ruru $ 600 nde. Ka MRO anyị na-aga n’ihu n’ịgbasa ngwa ngwa n’usoro atụmatụ anyị, mmekọ ọhụụ a na-enyere anyị aka ijere ndị Africa ndị ọzọ na-ebu ya ozi na mkpa nlekọta ụgbọelu Q-400. ”
Mlọ ọrụ MRO nke Etiopia ahụwo nnukwu mmụba n'ime afọ iri gara aga ma ugbu a na-enye nhazi ụgbọelu na Airbus A350XWB, Boeing 737/757/767/777/787, Bombardier Q100 / Q200 / Q300 / Q400, Diamond DA40 / 42 NG na Cessna 172 series ụgbọ elu ọzụzụ, gụnyere nyocha ndozi dị ukwuu na mgbanwe. Lọ ọrụ MRO na-arụkwa ndokwa A, B, C na D yana ọrụ ndozi a na-akwadoghị na nrụnye nku na 767 na 737.